Malunga Nathi-Changzhou Kede Netting Co., Ltd.
Iprofayile yaseCopmany | Inkcubeko | Izixhobo
Yasekwa ngo-1958, iChangzhou Kede Netting Corporation ngobuchule yenza zonke iintlobo zeminatha. Iimveliso zethu eziphambili zenkxaso yeentyatyambo, i-anti-bird net, i-vine net, i-sunshade net, i-anti-wind net, i-anti-animal net, kunye nezinye ezithengisa kakuhle kwilizwe lonke kwaye zithunyelwa e-Japan, eYurophu, kuMzantsi-mpuma we-Asia, njl. .
I-Kede ixhotyiswe ngamaziko emveliso aphuhlileyo asuka eJamani. Ngokuhambelana nenjongo yokusebenza yomthengi kuqala kunye nodumo oluphambili, kwaye umgaqo-nkqubo wokwaneliseka kwakho kukusukela. U-Kede uzibophelele ekuboneleleni abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, inkonzo egqibeleleyo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza ngamaxabiso akhuphisanayo.
Inkampani inenkqubo epheleleyo kunye nenzululwazi yolawulo lomgangatho.
Ukuthembeka kwethu, amandla kunye nomgangatho wemveliso zibonwa ngokubanzi kwishishini.
Inkampani ibambelela ekusebenziseni izixhobo ezitsha zoxinzelelo oluphezulu lwe-PE, ukuqinisekisa ukomelela kweemveliso, kunye nokusebenza kakuhle kokuchasana nokuguga kushishino.
Amaqhina alukiweyo e-net abunjwe bubushushu obuphezulu ukusombulula ngokupheleleyo ingxaki ye-slipknot ngomnatha olukwe ngesandla okanye umnatha we-PE osetyenzisiweyo, kananjalo ukwenza umnatha ungabi lula ukuwa kunye nokuphuka.
Iimveliso zale nkampani zifikelele kweyona migangatho iphezulu yeeparamitha zentengiso yezolimo yaphesheya.
Ithunyelwa eJapan, eYurophu nakuMzantsi-mpuma Asia iminyaka eli-13, kwaye inconywa ngabasebenzisi bamanye amazwe.
Kangangeminyaka, siye sazuza impumelelo eninzi yeemveliso ze-KEDE kweli lizwe ngamandla ethu obugcisa aqinileyo, umgangatho wemveliso ephezulu kunye nothungelwano lwentengiso oluphambili.
Kule mihla, inkampani iye yakha umzi-mveliso omtsha ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zeshishini. Kwishishini, Sigxininisa ekuphuculeni inkqubo yokuthengisa kunye nokwandisa kwimarike yamazwe ngamazwe, ukuze iimveliso ze-KD zisasazwe kulo lonke ihlabathi.
Kwixesha elizayo, siya kuhlala sisukela kwaye siqhuba uphuculo kuwo wonke umgama omtsha.